Otu esi edekọ ọtụtụ ndị ọbịa nke obodo na mbugharị H6 gị na ndị ọbịa na Garageband | Martech Zone
Y’oburu n’itukwasi obi na itinye Podcast, agam agba gi ume nke azoputa Mbugharị H6 edekọ. Ọ bụ naanị ngwaọrụ dị mfe chọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọzụzụ ọ bụla iji dekọọ. Tinye ụfọdụ Gbanyụọ igwe okwu SM58, obere mkpanaaka igwe okwu na-anọchi, ma ị nwere ụlọ studio ị nwere ike ịga ebe ọ bụla ma nwee ezigbo ụda.
Agbanyeghị, ebe nke a dị mma maka pọdkastị ebe ndị ọbịa gị niile nọnyeere gị, ịnwe onye ọbịa dịpụrụ adịpụ site na weebụ na-eme ka ihe sie ike. Nsogbu a bụ ọdịyo ọdịyo site na weebụ. Y’oburu n’inyere gi na laptọọpụ gị maka onye ọbịa, ndị ọbịa a ga-ekwughachi olu ha. Dịka, ọrụ maka nke a bụ ịzụta igwekota na mgbe ahụ ị nwere ike ịhazi ọtụtụ ụgbọ ala… otu na ndị ọbịa obodo gị niile, mgbe ahụ otu na ihe niile. Nwere ike ịkwanye ụgbọ ala mpaghara gị site na laptọọpụ gị, wee jiri ụgbọ ala ọzọ dekọọ ihe niile.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịnweghị igwekota ma ọ bụ na ị chọghị iburu ya? Anọ m na-eme ọtụtụ ntanetị na m kpebiri imechi nke m Indianapolis Podcast studio. Agbanyeghị, m ka na-edekọ ọtụtụ ndị ọbịa dịpụrụ adịpụ, yabụ achọrọ m ịchọpụta nke a.
Azụrụ m ihe niile m chọrọ iji were studio m n'okporo ụzọ ka m wee nwee ike ịdekọ na ihe omume ọ bụla ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ. Na mpụga nke laptọọpụ m, anaghị m emefu a tọn ego, ma. Ekwenyere m niile Gịnị, splitters, ekweisi, bia H6, na akpa m na-eri gburugburu $ 1,000. Nke ahụ bụ akụkụ dị nta nke obere akụ m nọrọ na studio m… ọ na-esiri m ike ịnụ ihe dị iche dị mma!
Ndekọ na Garageband NA bia H6
Ihe a na-eme na nhazi a bụ na anyị ga-edekọ onye ọ bụla n'ime ndị ọbịa obodo anyị na Zoom H6, mana anyị ga-edekọ onye ọbịa dịpụrụ adịpụ n'okporo ụzọ nke ha na Garageband. Nke ahụ bụ n'ihi na anyị chọrọ nchịkọta nchịkọta nke ndị ọbịa anyị niile ka ha banye na Skype (ma ọ bụ mmemme ọzọ) na-enweghị inye olu nke aka ha gaghachi na ha. Ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ dị mgbagwoju anya, lee nyocha nke usoro ndị a:
Gbanye ekweisi gị, mics, mbugharị, na laptọọpụ gị nke ọma.
Hazie Soundflower iji mepụta ngwa ọdịyo nke ọdịyo maka ịdekọ oku na Garageband.
Hazie ọrụ Garageband na Skype na Zoom gị n’onwe ya.
Hazie ntọala ọdịyo Skype iji jiri Soundflower dị ka ọkà okwu gị.
Malite ndekọ na Garageband, malite ndekọ na mbugharị gị, ma kpọọ oku gị.
Mgbe emechara, weta Mbugharị egwu n'ime ọrụ Garageband gị ma dezie pọdkastị gị.
Kwụpụ 1: Ijikọ mbugharị gị na laptọọpụ gị
Cheta, anyị na-eji na mbupute nke mbugharị dị ka ihe ọsọ ọsọ ụgbọ ala anyị Skype oku, otú ị na-aga na-eji Mbugharị na a nkịtị mode… agaghị agafe site na USB na Garageband.
Jikọọ a ekweisi / mic splitter gị Mac.
Jikọọ a 5-ụzọ isi okwu splitter n'otu akụkụ nke splitter. Echere m na m ga-achọ obere ụda isi okwu, mana nke a rụpụtara nke ọma!
Jikọọ akụkụ nke ọzọ nke splitter gị nkpu okwu isi na Zoom H6 na-eji eriri nwoke / nwoke nke bịara na isi ọkpọkọ isi.
Jikọọ eriri XLR nke igwe okwu gị na ntinye mbugharị gị.
Jikọọ ọ bụla nke gị ekweisi gị 5-ụzọ splitter. M na-eji ekweisi ọnụ ala maka ndị ọbịa ma tinyezie ekweisi ọkachamara m iji hụ na ọdịyo dị mma.
Nzọụkwụ 2: Wụnye Soundflower ma melite Ngwaọrụ Mebere
Ibudata ma wụnye Flowerda olu, nke na - enyere gị aka ịme igwe ọdịyo nke ọdịyo na Mac gị.
Jiri Mbido Midi Mepụta iji mepụta mkpokọta nchịkọta nke nwere ike ịnwe egwu nke aka ya na Garageband. Akpọrọ m pọdkastị m ma jiri igwe okwu ahụ etinyere (nke bụ ebe ekweisi mbugharị batara) na Soundflower (2ch).
Kwụpụ 3: Ntọala Garageband
Mepee Garageband wee bido oru ohuru.
Nanyagharịa gị Garageband mmasị na họrọ Podcasting dika nke gi Ngwaọrụ mbata ma hapụ Wuru-Na Ntinye dị ka Ngwaọrụ Mepụta gị.
Ugbu a tinye egwu na ntinye 1 & 2 (Podcasting) na ihe ntinye 3 & 4 (Podcasting). Otu egwu ga - abụ olu na - abata Skype ma nke ọzọ abụrụ mbugharị mbugharị gị (nke ịgaghị eji ebe ọ bụ na anyị na - edekọ egwu ọ bụla na Zoom H6 gị). Ọ kwesịrị ịdị ka nke a:
Nzọụkwụ 4: Melite Skype
Na Skype, ị ga-edozi ọkà okwu na ngwaọrụ gị, Soundda (2ch) ma okwu okwu gi Igwe okwu Esịtidem (nke bụ mbugharị Mbugharị H6 maka igwe okwu gị).
Tinye na ekweisi gị, mee a Oku nyocha Skype, ma hụ na ọkwa gị dị mma!
Kwụpụ 5: Dekọọ ma Garageband na Zoom
Nwalee igweokwu gị ọkwa na Mbugharị na pịa ndekọ ịmalite ịdekọ ndị ọbịa obodo gị.
Nwaleenụ gị audio etoju na Garageband na pịa ndekọ ka ịmalite ndekọ oku Skype.
Kpọọ oku Skype!
Nzọụkwụ 6: Dezie Podcast gị
Ugbu a na ịmechara, webata egwu egwu gị site na mbugharị gị, mechie mkpokọta nchịkọta gị ma dezie pọdkastị gị.
Ikpeazụ ederede, m hụrụ ihe akpa ubu akpa nke ahụ dabara na eriri m niile, mbugharị m, igwe okwu m, na-anọrọ onwe ya, ọbụnakwa tripod na mbadamba nkume ma ọ bụrụ na m chọrọ ịme ndụ gụgharia. Ana m akpọ ya Podcast Buru akpa… Ihu ọma otu Podcast studio na otu, padded, waterproof akpa m nwere ike iweta ebe ọ bụla.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m na edemede a.
Tags: amazonbelkingaa akpaekweisi splitterekweisimic splittermic guzoroPodcast akpaPodcast studioPodcasting ubu akpaobere Podcast studioobere studioskypeSonymbugharịmbugharị h6